Rallye – « Tour de Tanà », faha-18: norombahin’i Tahina ny amboara | NewsMada
Rallye – « Tour de Tanà », faha-18: norombahin’i Tahina ny amboara
Tontosa, ny faran’ny herinandro teo, ny “Tour de Tanà”, andiany faha-18, dingana farany amin’ny fifaninanam-pirenena, fanamoriana fiarakodia. Fifaninanana nokarakarain’ny klioba AsaTana. Taorian’ny fitsapana manokana miisa 13 nafana vay tokoa, nandrombaka ny amboara i Tahina.
Ady mafy ny natrehin’ny mpanamory nandray anjara tamin’ity dingana farany amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara 2018, fanamoriana fiarakodia, ity, indrindra teo amin’i Rivo sy i Tahina. Azon-dRazafinjoelina Tahina tamin’ny ora farany anefa ny fandresena. Vitany tao anatin’ny 1ora sy 59’ sy19’’ halavirana 160,95 kilometatra. Tafapetraka eo amin’ny laharana faharoa kosa Randrianarivony Rivo rehefa nisedra olana teo amin’ny mekanika. 20 segondra ny elanelam-potoana teo aminy sy i Tahiana. I Teddy sy i Herman kosa ny mamarana ny telo voalohany tamin’ny laharana ankapobeny. Ora 2 sy efatra minitra ny nanaovany ny fitsapana manokana miisa 13.
Azo lazaina ho sarotsarotra ihany ny fitsapana manokana tamin’ity indray mitoraka ity, raha ny voalazan’ny ankamaroan’ireo mpanamory. Tafakatra sivy ireo niala an-daharana hatramin’ny omaly raha toa ka telo kosa ireo nivoaka ny làlana. Ho an’i Jordan sy i Batsoa, nitrangana olana teo amin’ny mekanika izy ireo teo amin’ny ES11 ka nampivadika ny fiara nentiny.
Nifanenjika hatrany i Rivo sy i Tahina
Nafana vay ny fifanenjehana teo amin’i Rivo sy i Tahina. Nitana ny laharana voalohany nanomboka tany amin’ny ES1 ny ekipan’i Rivo sy i Ando ary samy nanantena ny fandreseny avokoa ny mpijery sy mpanaraka teny an-toerana. Nitsimbadika anefa ny valin-dalao tany amin’ny ES13. Efa nanomboka ny zoma sy asabotsy no nisy olana ny fiaran’i Rivo sy i Ando. Somary nitandrintandrina, araka izany, izy tamin’ny andro farany hisorohana ny mety ho fialana an-daharana sy ny loza mety hitranga. Antony nahavery kely azy ireo izany, raha ny fanazavana nentin’i Rivo. Hatreto, raha atao ny tambatr’isa nandritra ny dingana enina tamin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara 2018, manana ny isa ambony indrindra i Tahina. Mbola miandry ny fanapahan-kevitra farany anefa vao afaka mamantatra izay tena tompondaka amin’ity taona ity, eo amin’ny fanamoriana fiarakodia.
Ireo dimy voalohany “18e Tour de Tanà”
1-Tahina sy Tovohery (Subaru Impreza) : 01 :59’ :19 ‘’
2-Rivo sy Ando (Subaru Impera): 02:00’:00’’
3-Teddy sy Herman (Ford Ranger): 02:04’:00’’
4-Davonjy sy Yoan (Foton Tunland): 02:04’:09’’
5-Freddy sy Jimmy (Isuzu D Max): 02:06’:53’’